UDkt Quraisha Dawood nencwadi yakhe.
Umfundi wakudala wase-UKZN uDkt Quraisha Dawood ushicilele inoveli yakhe yokuqala esihloko sithi Stirring The Pot, exoxa ngeqeqebana labesifazane abangamaSulumane, abahlala efulethini eliseThekwini i-Summer Terrace.
Ubungani balaba besifazane buthungelene njengama-tattoo aseNdiya adwetshwe ngodayi we-henna. Sikwethulela u-Anti Ruki, ohlala nomsizi wakhe wasendlini uJoyce, okuyinto ecasula abaningi. Kukhona noZaina, owenza izifundo zezokwakha kwenye yamanyuvesi avelele eThekwini, nonina uRabia, omkhulise eyedwa, esebenza kanzima ukuze indodakazi yakhe iphile impilo ephephile. U-Zaina unemfihlo engalimaza ubudlelwano bakhe nonina: unesoka ogama lalo ngu-Imraan, kanti ukuthandana kwabo akuvunyelwe.
Lena yindaba eshubile ngomesisi nabasebenzi basezindlini zabo, abesifazane nabayeni babo, izimfihlo namanga, umshado, ukufa, ukweba, umkhosi iRamadan, nezindlela zokuthaka izinongo zokudla komdabu.
Le noveli isuselwe ephepheni locwaningo ka-Dawood yeMastazi eyayibheka ubudlelwano 'bomedemu' abangamaSulumane 'nabasizi' babo, ukuthi bawaphatha kanjani amakhaya, ubuhlanga, inkolo, ukuzazi nokuba ngumuntu wesifazane, ikakhulukazi ezindaweni eziminyene njengamafulethi.
U-Dawood uthe ucwaningo lwakhe lwaluhlaba umxhwele, luthinta umphefumulo futhi luhlekisa. 'Bengingeke ngikwazi ukuyeka ucwaningo olunothe njengalolu luphelele eshalofini emtapweni wolwazi - bengifuna luphile; luvuselele izinkulumo ngalolu daba olukhulukazi nokuthi abafundi babone ububona kubalingisi. Ngokuqhubeka kwesikhathi, ngiqambe indaba ngisusela ocwaningweni lwami, ngibheka indaba yokudla, izingxabano, ukufana kanjalo nezigameko ukuze abafundi bathole umsoco wocwaningo ngendaba exoxwayo. Kuyintokozo kimi ukuthi iPenguin iwuthakasele umsebenzi wami.'
Selokhu kwathi nhlo u-Dawood ubegxile ekubhaleni izindatshana nezinkondlo ngoba ecabanga ukuthi ukuzibophezela ukubhala inoveli kungumsebenzi ongelula.
‘Bengilokhu nginokuzingabaza... kodwa uma unendaba ofuna ukuyixoxa, hlala kuyona. Ungazifakeli ingcindezi ngokulindele, jabulela nje ukuqhubeka kwendaba. Zenzele wena. Uma usukulungele ukuxoxela umhlaba indaba yakho, xhumana nomshicileli. Noma indaba yakho iphetha ngokushicilelwa noma cha, bhala ubhalele wena – wonke umuntu unendaba angayixoxa, futhi akekho ongabhala indaba yakho kangcono kunawe,’ kusho yena.
Le noveli kulindelwe iqale ukutholakala ezitolo zezincwadi ngoNdasa wonyaka wezi-2022 kodwa iyatholakala nge-inthanethi kwi-TakeAlot, e-Exclusive Books, eWordsworth Books naseGraffiti Books.
U-Dawood ungumbhali nesazi kwesokuhlalisana kwabantu. Ngonyaka wezi-2002 ushicilele incwadi yezinkondlo esihloko sithi Jewels of Faith: Poems for Muslim Youth. Useke wabhala amaphepha ashicilelwa kwi-Reader’s Digest, i-Irtiqa magazine, i-Al-Qalam, i-Al-Ummah, i-Sunday Tribune, Riding the Samoosa Express and Saffron, nasemabhukwini ezifundiswa. Uneziqu zobudokotela kwiSosiyoloji zase-UKZN kanti kumanje uyimenenja yocwaningo lwesikhungo semfundo esiphakeme esizimele.